Hoggaan habboon iyo Hoggaamiye hubban | Shabakada Alshahid
Added by Bashiir M. Xersi on December 4, 2012.
Hore waxaan u qormay qormo ahayd: “Foolal cusub iyo Faro Caddaana” oo aan ku cabbiray in inta dagaal iyo dirir ka qaybqaadatay aan talo iyo xil naloogu dhiibin, isla sidookale aan xil naloogu dhiibin inta musuq iyo is daba marin samaysay. Qormadii xigtayna waxay ahayd: “Haraadigu yuusan kala harin!” oo aan ku xarriiqay in aan kuwii xilka hore u soo qabtay aan dib loo soo celin. Haddaba qormadan gunaanadka u ah halbeeggaa, ayaan ku qeexi doonaa HOGGAAN la’aan inaan dhibkan laga baxayn, ee aqris wanaagsan.
MAAMUL waa: “Hagidda iyo hirgalinta qorshe xilli dhaw ama xilli fog la tiigsanayo”. Dabcan, qorshe maalimeedkuna yahay yoolka koowaad, illeen haddaan iyada la fulin inta kale inay dhaqangalaan waa: CALAACAL TIMA KA SOO BAXAANE!Sida awgeed, maamulkii wanaagsanaadaa, wuxuu helay HOGGAAN, oo haddaa HOGGAANNA muxuu yahay?
HOGGAAMINTU waa: “Unugga isku xira koox, qolo, qayb isku shaqo ah ama dan wadaag ah” sidoo kale, waxaan marna laga maarmin in aan sheego HOGGAAMIYAHA, oo ah unugga aan xusnay qofka gunaddiisa leh. Haddaba HOGGAAMIYE waa: “Qof loo xilsaaray ama isu xilqaamay hagaajinta iyo meelmarinta qorshe nololeedkaAadanaha”. Wuxuu leeyahay meel uu higsanayo, hadaf uu tiigsanayo,ujeeddo uu bartilmaameedsanayo oo ah: Dajinta qorshooyin la xiriira aayaha dambe iyo mustaqbalka foodda inagu soo haya, saadaasha, sahaminta iyo odoroska yool aan hummaaggiisu muuqan, illeen;qorshe la’aani waa nolol la’aane.
In kasta oo casrigan qaab nololeedka dadku aad u hormartay, ay jiraan shuruudo badan oo hoggaanka, hoggaaminta iyo hoggaamiyahaba lagu xiro, haddana, kuwaa iyo kuwa dib ka imaan kara ama kuwo laga gudbayba sida loo nool yahay awgeed, waxaa biyo kama dhibcaan ah, in hoggaamiyaha aan GACAN LAGU SAMAYN, SANDUUQ DOORASHANA laga soo dhex bixin, ee ay tahay ABUURIS iyo BAXAALLI hore,amase DHALSHO iyo GEELADAAQ u gaar ah, oo dabcan ay wehliso WAAYO ARAGNIMO iyo KHIBRAD nololeed, bal murtidan dhuux: “Dadku waa : Madax ku Cirroole [Waayeel] Maan ku Cirroole [Waayo arag] iyo Mijo ku Cirroole [Dalmar/Dhulmareen]”.
Murti dhaxalgal ah oo Soomaaliyeed baa tiraa: “Xukun waxaa kaa qaada: GAR QALLOOCAN, GACAN LAABAN iyo GUDDOON JILICSAN” guddoon jilicsan loogama jeedo inaad dadka ku amar ku taaglayso ama aad kali taliye noqoto!Balse, waxaa looga jeedaa inaadan noqon in go’aan jilicsan ee inta go’aan qaata haddana ka laabta.
1.	Isku kalsoonaan.
2.	Qorshayn qoran.
3.	Go’aan qayaxan.
4.	Aragti qeexan
5.	Barashada xallinta dhibaatooyinka
6.	Dhimrin & Dhimirqab
Madaxda dawladda ugu sarraysa maalmihii xilka looga tanaasulay ama loogu shubay ama loo magacaabay, dadka qaar waxay u ahayd maalmo ISBADAL, haddana, ma sheegi karaan waxa isbadalay, iska daa inay garanayaane! Illeen wixii la garanayaa la sheegaaye, haddana, bal aan la gurinno, si aan naloo dhihin waxaad tihiin dawlad diid iyo qaran dumis![QASWADE]Oo ayaamahan Moodo iska noqotay, oo sida muuqata badashay eragii ahaa: KACAAN DIID ama TAWRAD DIID!
Dayaca jira, dumarka iyo weeyaalka meel walba daadsan, Agoonta iyo cirroolaha aan aagaan iyo agab midna haysan, Muqdisho oo noqotay Magaalo Qaxooti dhexda, dhinac iyo dhan walba ka deggan yihiin ayaa Baarlamaanka lagu sheegu in 70% ay yihiin AQOON YAHAN badalay QABQABLAYAASHII lana gaaray xilligii ISBADALKA waxay doonayaan inay u codeeyaan inay MUSHAAR u qaataan bil walbaSHAN KUN DOLLAR 5.000$.
Midda kaba muhimsan baa ah, horta xildhibaanka yaa soo doortay? Waxaa keensaday ODAYCanka Buuri ugu jiroo, Shaarbbo Galoolanoo Dabo ku Rays leh, haddaba, Xildhibaanka doonaya mushaar, ha u doonto Odagaa soo magacaabay? Aan sii ballaarshee, ha u doonto Beesha uu ka dhashay ee meesha keensatay, illeen maamulka dawladdu wuxuu ku dhisan yahay waa afar iyo bar oo ka dhigan beelee.
Aqriste, aan kuu jilciyee horaba FEDERAL “BEELO” ah ayaan u ahayn, oo beel weliba dhib iyo dheefteeda gaar ayay u qaybsan jirtay, illeen heer;Qoys, Raas, Jilib, Jufo iyo Beel guudba ayaa loo wadaagaaye, waxayna leeyihiin BOQOLLEEY ay wax ku qaybsadaan, haddaan xubnihii dalka maamulayey ku qaybsannay, maxaa diidaya in dhaqaalaha soo gala iyo kan baxayaba aan ku qaybsanno beel?! Aqriste, xal ma u aragtaa? Waan dareemaa inay adagtahay.